वार्ताबारे ताजा धारणाः ठूलो दमनको तयारी, नेकपा भ्रममा छैन- सन्तोष — OnlineDabali
वार्ताबारे ताजा धारणाः ठूलो दमनको तयारी, नेकपा भ्रममा छैन- सन्तोष
Posted on September 28, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगरले वार्तालाई भित्रभित्रै षड्यन्त्र र बाहिर देखाउने दाँत मात्रै भएको बताएका छन् । उनले वार्ता ठूलो दमनको तयारी हुन सक्ने समेत बताए ।
नेता बुढामगरले सरकारले बेबकुफी प्रर्दशन गरिरहेको यसको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र हुन सक्ने बताएका छन् । उनले सरकारले एकलौटी रुपमा वार्ताको कुरा गरिरहेको भन्दै त्यसका तीन कारण हुन सक्ने बताए ।
सन्तोष बुढाले वार्ताबारे पार्टीका धारणासहित लेखेको पछिल्लो लेख
वार्ता आफैँमा गलत हुँदैन । वार्ताका आफ्ना निश्चित मान्यताछन् । सैद्धान्तिक रूपले वार्ताका विरोधी कोही पनि हुँदैन र नेकपा पनि वार्ताको विरोधी छैन तर वार्ताको मूल्यमान्यतालाई भ्रष्टीकरण गरी वार्ताजस्तो गहन विषयलाई ‘मजाक’ गरेर उडाउने विषय होइन । यो कुनै खेलाँचीको विषय पनि होइन । दोस्रो कुरा, यसलाई षड्यन्त्रको विषय बनाउनु हुँदैन । वार्ताको सामान्य रूप पनि हुन्छ र विशिष्ट रूप पनि हुन्छ । कुनै पनि विषयमा दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा लिने वा सहमतिको बिन्दु खोज्ने मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम हो वार्ता । यो मिल्नसक्ने विषयहरूमा छलफल गर्न दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिने विषय हो । कुनै एक पक्षको मनोमानीमा गर्ने विषय होइन । बृहत् अर्थमा लिने हो भने यो राजनीतिक रूपमा राज्यसत्ताको समस्या हल गर्ने प्रश्न आउँछ वा युद्धरत-सङ्घर्षरत-आन्दोलनरत दुई पक्षबीच समस्यासमाधानका लागि प्रयोग गरिने विषय हो । वार्ताबाट सानादेखि ठूला विषयसम्मका समस्या हल गर्न सकिन्छ तर राज्यसत्ताको प्रश्न निकै जटिल विषय हो । यसका लागि वार्ता अस्थायी हल मात्र हो । यसको स्थायी समस्याको हल खोज्नु नै सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ ।
हामी सुनिरहेकाछौँ र हेरिरहेकाछौँ- यो सरकारले किन बेबकुफीप्रदर्शन गरिरहेको छ ? यसका पछाडि केही षड्यन्त्र छ भन्ने आभास हुन्छ किनकि राज्यसत्ता आफैँ बिनाकारण अपहरणशैलीमा अराजनीतिक ढङ्गले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको अधिकारका पक्षमा, भष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउँदा र राज्यसत्ता गलत छ, गलत गरिरहेको छ भनेर जनतालाई सचेत बनाउने जनपक्षीय र देशभक्त–राष्ट्रवादीहरूलाई बिनाकारण धरपकड, थुनछेक गर्ने, अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भूmट्टा मुद्दामा फसाउने, राज्यआतङ्कको वातावरण आफैँनिर्माण गर्ने र आफैँ वार्ता वार्ता भनेर स्यालझैँ डाँडामा गएर चिच्याउने किन गरिरहेको छ ? सबैले बुझ्ने विषय सायद यसैमा छ । यसको पछाडि केही कारण अवश्य छन् । यसको पहिलो कारण जनता, देशभक्त–राष्ट्रवादी, बुद्धजीवीहरू सबैले राज्यको गलत रबैयाको विरोध गरे । कतिपय लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि दमन र अलोकतान्त्रिक रबैयाको विरोध गरे । यसपछि ती सबैको मुखमा बुजो लगाउन, आँखामा छारो हाल्न र भोलि अझ ठूलो दमनको वातावरण बनाउन यो वार्ताको कार्ड फालेको हुन सक्छ । मुख्य कुरा यही हो । यसपछिका अन्य कारणहरू यति हत्या, दमन र धरपकडबाट कतिको गलेका छन् भनेर नाडी छाम्ने तरिका हुन सक्छ । तेस्रो तरिका वातावरण अलि शिथिल पारी पानी सङ्ल्याएर माछा मार्ने तरिका हुन सक्छ । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकारको दमन र राज्यआतङ्कको सन्देश नकारात्मक पर्न गएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको दबाब र नकारात्मक प्रभावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ताका माध्यमबाट निकास खोजिरहेको देखाउने एउटा नाटक हुन सक्छ । समग्रमा यो आन्तरिक रूपमा एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो र बाहिर देखाउने दाँत मात्र एउटा नौटङ्की हो ।